कसको मायामा परिन् गायिका मेलिना राई ? (भिडियोसहित) - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
कसको मायामा परिन् गायिका मेलिना राई ? (भिडियोसहित)
काठमडौं, २१ मंसिर । ‘यो माया हो’, ‘सेवारो नमस्ते’ लगायतका सफल गीतहरु बजारमा ल्याइसकेका गायक मविन्द्र राईले नयाँ गीत ‘माया जालै’मा बोलको म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक गरेका छन् ।
यूट्यूवमा सार्वजनिक गरेको २ हप्तामा नै ‘माया जालै’मा बोलको गीत हेर्नेको संख्या २ लाख नाघिसकेको छ । यूवापुस्ताकी चर्चित गायिका मेलिना राई र गायक मविन्द्र राईको आवाजमा रहेको ‘माया जालै’मा बोलको गीतमा गायक मविन्द्रकै शब्द र संगीत रहेको छ ।
पुतलीसडकमा रहेको डि. स्टूडियोमा रेकर्ड गरिएको गीतमा दिनेश श्रेष्ठको संगीत संयोजन छ । यूवापुस्ताका दर्शकहरुलाई लक्षित गरेर निर्माण गरिएको सार्वजनिक ‘माया जालै’ मा बोलको भिडियोमा शैलेस हमाल र अन्जु भण्डारीले अभिनय गरेका छन् । भिडियोमा शैलेस र अन्जको केमेष्ट्रि निकै लोभलाग्दो देखिएको छ ।
रुपेश श्रेष्ठको छायाँकन, सम्पादन र निर्देशन रहेको भिडियोको मेकिङ गज्जबकै देखिन्छ । लगातार आफ्ना गीतहरु दर्शक, स्रोताहरुले मनपराइरहेको अबस्थामा चाँडै गायक मविन्द्र राईले ‘तर्की तर्की’ बोलको गीत पनि बजारमा ल्याउँदैछन् । यो गीतमा पनि गायक राईलाई गायिका मेलिना राईले साथ दिएकी छिन् ।